I-Ultrasonication inqubo esungulwe kahle yokuqinisa inqubo, esetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zezicelo zamanzi ezifana ne-homogenization, ukuxuba, ukusabalalisa, ukugaya okumanzi, i-emulsification kanye nokwenza ngcono ukusabela kwamakhemikhali okungafani. Uma inqubo yakho yokukhiqiza ingasebenzi kahle futhi ingafinyeleli imigomo ethile yokukhiqiza, ungahle uthande ukubheka i-ultrasonication njengenqubo yokulekelela.
Ukuxubana kwe-Ultrasonic, Homogenization, kanye nokuhlakazeka
I-Ultrasonication iyindlela esebenza kahle kakhulu yokuxuba, ukuxuba, ukuhlanganisa, ukusabalalisa kanye nokuqinisa izinhlelo eziqinile-zoketshezi nezingamanzi. Ama-mixer we-Ultrasonic high-shear aphula izinhlayiya namaconsi futhi anciphise usayizi wawo kahle ukuze kutholakale ingxube ezinzile, efanayo. Inzuzo ebalulekile yokuxubana kwe-ultrasonic ukuphatha okungenamsebenzi koketshezi nama-slurries ane-viscosities ehamba kancane kakhulu ukuya phezulu kakhulu. Ngisho nezinhlayiya ezilimazayo azinankinga kubaxube be-ultrasonic.
Funda kabanzi mayelana nokuhlanganiswa kwe-high-shear kwe-ultrasonic!
Iprosesa ye-ultrasonic UIP16000 ukusebenza okuphezulu, inqubo eqinisa i-homogenizer yazo zonke izinhlobo zokuxuba izinhlelo
Ukuxuba amasistimu aqinile-ketshezi noketshezi olunamandla amakhulu e-ultrasound, ukudluliswa kwesisindo phakathi kwezigaba ezimbili noma ngaphezulu noma izingxenye zenhlanganisela kuyathuthukiswa. Ukukhuphuka kokudluliswa kwesisindo kuyaziwa ngokuthonya okuhle ukusabela okuningi kwamakhemikhali njenge-heterogeneous catalysis. Ngokwengeziwe, i-ultrasonic cavitation ingenisa amandla aphezulu ezinhlelweni zamakhemikhali ngaleyo ndlela iqale ukusabela kanye / noma ukuguqula izindlela zokuphendula. Lokhu kuholela emazingeni wokuguqulwa kwamakhemikhali athuthukiswe kakhulu kanye nokuvunwa. Okokusebenza kwe-Sonochemical kanye nama-reactors kuvame ukusetshenziselwa ukuguqulwa kwe-transesterification, i-polymerization, i-desulphurization, izinqubo ze-sol-gel nokunye okuningi okuphendukezelayo okunezinkinga. Funda kabanzi mayelana nokusabela kwe-sonochemical!
Izicelo ze-Ultrasonic eMbonini Yezokudla
I-Ultrasonic high-shear homogenization ubuchwepheshe obungeyona eyokushisa obusetshenziswa ezinqubeni eziningi zokukhiqiza zokudla, iziphuzo kanye nezithako zokudla. Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa ekukhiqizeni amasoso, amasobho, amajusi, ama-smoothies, izithasiselo zokudla (isb. I-elderberry, i-cannabis) ukuze kukhishwe ama-flavour compounds, imibala yombala, amavithamini nezakhi zokudla okunempilo ukuze kwakheke ukunambitheka okukhulu, okunempilo umkhiqizo wokudla. Ngenxa yamakhompiyutha wokunambitheka akhishwe kanye noshukela wemvelo, ukungezwa koshukela ocwengekile kanye nezithasiselo zokunambitheka zokwenziwa kungagwenywa. Funda kabanzi ngokucubungula kwe-ultrasonic kokudla neziphuzo!
I-Ultrasonication isetshenziswa ngesikhathi sokulungiswa kokudla ukuze kuqiniswe futhi kuthuthukiswe
ukugoqa (Liposomes, ama-nanoparticles aqinile e-lipid)
I-Ultrasonic Synthesis nokusebenza kweNanomaterials
Ukucubungula kwe-Ultrasonic kanye ne-acoustic acoustic evelayo ingabeka ukucindezelwa okwedlulele kuzinhlayiya futhi ikwephule ilawulwe iye kusayizi omncane we-micron nano. Isimo se-acoustic cavitation senza i-shear ephezulu, iziphithiphithi, ingcindezi ephezulu kakhulu nokwehluka kwamazinga okushisa. Lezi zimo ezishubile zenzeka ngenxa ye-bubble implosion engabonwa lapho amandla amakhulu e-ultrasound enza imijikelezo ephezulu yengcindezi, nengcindezi ephakathi nendawo. Ngenkathi i-jets ewuketshezi kanye ne-interparticle collision impinge, ikhukhula futhi ichithe izinhlayiya, ingcindezi ye-quasi-hydrostatic eyenzekayo ingaguqula ukwakheka kwezinhlayiyana ezifana ne-porosity. I-Ultrasonic nanoparticle functionalization ivumela ukuhlanganisa izinto zokusebenza okuphezulu ngokuqina okuthuthukile kokushisa, amandla angajwayelekile we-tensile, i-ductility, i-thermal ne-conductivity kagesi, izakhiwo ze-optical njll zama-nanomaterials.
Funda kabanzi mayelana ne-ultrasonic nanoparticles synthesis kanye nokusebenza!
ultrasonication – Imiphumela ye-Synergistic
I-Ultrasonication ingashintsha umshini ongasebenzi kahle noma ihlanganiswe cishe nanoma iyiphi inqubo yokuthola uketshezi etholakalayo ukuze icwenge futhi ithuthukise imiphumela ye-subpar. I-Hielscher probe ultrasonicator ihlanganiswe emigqeni ekhona yokukhiqiza nge
ama-colloid mixers & izigayo
ubuhlalu / pearl izigayo
abaxube be-shear ephezulu
ama-homogenizers anengcindezi ephezulu
ama-blade mixers / ama-rotor-stator mixers
ukufudunyezwa kokushisa (HTST)
Inkambu kagesi egxishwe ngamandla (USIZO)
ukukhanya kwe-ultraviolet (UV)
Ukufakwa kwe-Ultrasonic kwe-3x I-UIP1000hdT ngezinqubo ezisindayo zomsebenzi
I-Wether ifakiwe yodwa noma ihlanganiswe namasu wokucubungula ajwayelekile wemiphumela yokusebenzisana, ukuhlanganiswa kwe-ultrasonication kubangela izinqubo ezithuthukisiwe neziqinisiwe.
Izinhlelo Zokusebenza Eziphezulu ze-Ultrasonic Zokuqina Kwenqubo
Imiklamo ye-Hielscher Ultrasonic, ikhiqiza futhi isakaze ama-ultrasonicators asebenza kakhulu ngezinhlelo zokusebenza ezisindayo. Iphothifoliyo yethu ihlanganisa lonke uhla kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kuma-bench-top kanye nama-processor asebenza ngokugcwele asezimboni, okusenza sikwazi ukuncoma ukusethwa okuhle kwe-ultrasonic kohlelo lwakho lokusebenza nevolumu yokucubungula.
Thintana nathi manje ukuze uxoxe ngokuthi inqubo yakho ingazuza kanjani kusuka ekuqinisweni kwenqubo ye-ultrasonic! Abasebenzi bethu abanesipiliyoni eside futhi abaqeqeshwe kahle bakunikeza imininingwane ejulile nemininingwane yezobuchwepheshe.